Brussels maxaa laga filan karaa? | Waayaha
You are here: Home 2013 September Brussels maxaa laga filan karaa?
Brussels maxaa laga filan karaa?
Posted on September 29, 2013 by caano | 0 Comments
Marka aad dhinacyo badan ka fiiriso sida xaaladda dalka Soomaaliya ay tahay waxaa kuu soo baxaya sawir aad u quruxsan iyo xirfad qoto dheer oo uu soo diyaariyay guumeysi itaal sheeganaya kaana indho-saabaysa in dalkii laga qaaday dadkii Soomaaliyeed, wax kale iskaba dhaafee xataa Haruubkii caanaha lagu lisay waxaa laynoogu bedelay caagag!…Mise annagaan u fiirsanee Haruubka ka hor annagaa layna bedelay…Mise wali waa annagiiyee waan yara sinbirixannay!
Brussels, fili maayo inay wax baraka ah Soomaalidu ka soo qaadayso! Waxaana taas ka daran in madax-weyne Xasan SHiikh oo isagu ah bu’da xalka aan rajo laga qabin inuu taas fahmo laakiin uu waqtigiisa ku dhuminayo siduu u noqon lahaa madax-weyne awood badan!…Mindhaa dheeraa haadaaanta laynoo qoday! Laakiinse Allay leedahay.
Bal adigu is weydii ragggii shalay lahaa dowladda lacagihii deeqda ahaa madaxdeedaa jeebka ku shubtay ayaa maanta inoo sheegaya in isla raggii ay sheegeen in lacagahii ay jeebka ku shubteen ay u ururinayaan kaalmo lacageed oo gaaraysa HAL BILION!…waa wax aad loola yaabo! Ma waali baa mise miyir qab? Mise markii horaba nimankan waa la nabsanayay? Bal adigu macnee!… Marna ma malaysay in nimankan dalkii laga gadanayo oo ay inoo kaceen nuskhado (koobiyo) badan oo ah Cabdi-Raxmaan Cabdi-Shakuur!….
Wali waxaanan warar sugan iyo xog innagu filan laga hayn xiriirkii iyo shirarkii ay dowladda Ingiriiska la yeelatay Xasan SHiikh Max’uud, siiba David Cameron, waxaase siyaasiyiinta is khilaafsan tiro aan mar iyo labo ahayn ka soo yeertay dhexdooda in waraaqo cad-cad laga saxiixday madax-weyne Xasan SHiikh, talada iyo aayaha dalkana ay shacabku ka yihiin Uur-jiif/ DHicis Hooyadii Buu Ku Gowracanyahay! Ama ay ugu dhantahay waraaqaha cad-cad ee madax-weynuhu saxiixay!
Nicholas Kay kaalintii uu ka ciyaaray shirka lagu heshiisiinayay maamulka Jubba iyo kan dowladda dhexe ee federal-ka iyo ergaygii dowladda Ingiriiska uga qayb galay shirkii la dagaalanka burcad badeedda ee toddobaadkii la soo dhafay lagu qabtay dalka Imaaraadka carabta talooyinkii uu soo jeediyay marka la fiiriyo waxaa kuu soo baxaya inuu jir wax gaar ah oo ka dhaxeeya qolka gaboobay ee lambar10 ee Downing Street iyo Xasan SHiikh Max’ud, sababtu waxay tahay labada ninba waxay inkirayeen dastuurka dadka Soomaaliyeed ku heshiiyeen, sida muuqatana Nicholas Kay ayaa ergay gaar ah u ah David Cameron in ka badan ergaynimmada ay u soo magacaabatay Qarammada Midoobay ama aad moodaa asal ahaanba in magaca Qarmmada Midoobay loogu soo raad gaday!……
SHirkan ka furmay Brussels ee loogu yeeray New Deal ayaa waxaa ka soo qayb galaya dulaalay sida la qiyaasayo inay labo gjeer tiro ahaan ka badnaan doonaan tirrada diplomats-yiinta dowladaha iyo Deeq-bixiyeyaasha lagu wado inay kaalmo ugu yaboohaan dadka Soomaaliyeed, xanta soo baxaysa ayaa tilmaamaysa in dulaalaydan intooda badan ay la balansanyihiin madax-weyne Xasan SHiikh Max’uud iyo toboneeyo nin oo ka mid ah wafdigiisa oo leh ururo aan dowli ahayn (Non Governmental Oganisations) kuwaasoo uu qorshuhu yahay inay heshiisyo dulaaleydaas kula galaan magaca dowladda iyadoo uu madax-weynahana maamuus ahaan goob joog uga noqonayo (macnaha uu bixinaya OGGOLAANSHO DADBAN), mana aha markii ugu horeysay ee arrimo noocaan oo kale ah la soo sheego, waxaana horay arrintan oo kale looga soo sheegay shirkii dalka Japan ka dhacay .
Sida ay dad badan ku dhaliilayaan madax-weynaha wuxuu wali ka lug bixi la’yahay xiriirkii iyo dhaqankii hay’adaha aan dowliga ahayn oo ee uu ku soo jaro bartay, waxayna arrintu aad u haraysay dabeecadda guud ee xafiisyada madax-weynaha, ra’iisal wazaaraha, iyo af-hayeenka barlamanka oo dhammaantood intaysan xafiisyada immaan ku soo dhex jiray maamulka ururada aan dowliga ahayn ee dalka ka jira.
Waxaa in lays weydiiyo u baahan Xasan Shiikh muxuu rabaana?! Lix Tiir buu sheegayay dhankoodiiba ma aadin ee meelo kale ayuu ku mashquulay, waxaadna moodaa inay jiraan wax dantiisa gaarka ku salaysan inuu ka dhex raadinayo xilka loo dhiibay, waayo haddii kale wax buu garowsan lahaa ama laga garowsan lahaa, waxaase nasiib darro ah oo intaas ka daran inuusan danba ka lahayn ama uusan ogeyn kala fogeeynta uu ummadda sii kala fogeeyay, iyo colaadaha cusub ee uu horseedayo.
Xasan SHiikh haddii uu leeyahay ninkii caroodaa ha iska tago! Ninkii goostaa ha iska go’o! Ninkii …wax kasta aniga iri, maba ahayn inuu xilkaan soo raadsado waxaana arrin aad loola yaabo ah ninka maanta raba inuu Soomaaliya madax-weyne ka noqdo ee ku fekeray inuu yeesho oo dalka ku maamulo awooddii uu Siyaad Barre lahaa oo kale.
SHirka Brussels uma eka inuu wax weyn kaga duwanaan doono macno ahaan kii London Soomaalida loogu qabtay Febrauary, 2012kii waxaana dhici karta inay ku sii kala fogaadaan madax-weyne Xasan SHiikh oo isagu rumaysan in uu yeesho awood balaaran sida muuqatana dastuurkiisa jeebkiisa kala soo baxay, iyo madax-weynaha maamul goboleedka Puntland, Cabdi-Raxmaan SHiikh Max’ed oo iasgu mar kasta ah ku haysta inuusan madax-weynaha ku dhaqmayn dastuurkii lagu heshiiyay.
SHirka Brussels ayaa sida hadda la saadaalin karo ku xiran is fahamka dalalka danaha ka leh Soomaaliya iyo waliba inay isku af gartaan dhaqaalaha la ururinayo sida loo gaarsiinayo gobollada Soomaaliya, waxaana jiray khilaafaad horay u soo baxay oo la xiriira inaan deeqaha iyo dhaqaalaha la soo marayo dowladda federal-ka Soomaaliya aysan gaarin gobollada dalka, taasoo ay waliba dalalka deeqaha bixiya qaarkood rumaysanyihiin in maamul goboleeddada jira si toos ah loo siiyo wixii loogu talo galay, waxaana arrintaas si toos ah uga soo hor jeeda dowladda Ingiriiska oo ay iyadu horay isugu qabteen xubno ka tirsan EU-da.
Sida hadda dalalka aan deriska nahay iyo dowladaha kale ee Soomaaliya daneeya ay dalka u maamulaan marka la fiiriyo iyo sida Xasan SHiikh Max’ud u dhaqmayo waxaad is leedahay madax-weynaha waxba kalama socda xaaladda uu dalka ku suganyahay, keliya waxaa uu la shir yimid xisaab aad u hooseeysa oo la tirinayo inta la macaashay oo keliya iyadoo aan la garab dhigayn khasaaraha jira, xisaab ku salaysan dhaqan aad u hooseeya oo ah midka Soomaaliya meesha ay taalo dhigay.
Wax kasta oo shirkaas ka soo baxa waa shaki la’aan inay burburayaan, sababta ugu weyn ay eersan doonaan waa ballanta Xasan SHiikh Max’ud uu ka haysto David Cameron oo uu Xasan SHiikh aaminsanyahay inay Soomaalida u san-dulaynayso, iyo Nicholas Kay oo malaha u haysta in Hong Kong labaad ay Soomaaliya noqonayso sida uu Mr. Cameron ugu sheekeeyay, boliis dadka u xirxira iyo maxkamadihii u xukumi lahaa raba inuu dhisto…. Wallee qabkaas iyo Soomaali! waa hubaal inaad is weydiinayso Soomaalidaasi xagee bay joogtaa?!…. Soomaalidaas wali waa jirtaa waana joogtaa! Soomaalidu cadowgeeda waa taqaan, waana u toog haysaa!
Filed in: Maqaallada
Xarfo: Khilaaf soo kala dhex-galay wasaarada deegaan iyo beeralay (DHAGAYSO)
(Warbixin) Waa maxay saameynta ay yeelan karto lacag cusub oo suuqyadda Puntland soo gasha?
Faallo:- Aaway Balan-qaadkii Madaxwayne C.wali Cali Gaas ee Gobolka Sool ?